काेराेनाभाइरस राेक्ने नाममा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड, शरीरमै छरियो हानिकारक रसायन
रिपोर्ट सोमबार, वैशाख २२, २०७७
अनमोल फ्यासिलिटी क्लिनर्सले काठमाडौंको ओमबहालमा महिला र बालबालिकामाथि अनुमति बिना हानिकारक रसायन छर्किदै । तस्वीर: पूर्णिमा श्रेष्ठ
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन मुलुकमा बन्दाबन्दीदेखि नियन्त्रणका विभिन्न काम भइरहेका छन्। सरकारले विभिन्न ठाउँमा ‘डिस्इन्फेक्ट’ अर्थात् संक्रमणमुक्त पार्न भन्दै रसायन छर्कंदै आएको छ। यसै क्रममा एक निजी कम्पनीले जीवाणु संक्रमण रोक्ने नाममा मानिसमाथि नै रसायन छर्किएको गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको छ।
आइतबार अनमोल फ्यासिलिटी क्लिनर्स प्रालिले काठमाडौंको ओमबहालका स्थानीयलाई पालैपालो शिरदेखि पाउसम्म रसायन छर्कियो। उक्त कम्पनीले वृद्धदेखि बालबालिकासम्मलाई एक–एक गर्दै शरीरमा किटनाशक रसायन छर्किएका तस्वीर र भिडियाेहरु सार्वजनिक भएका छन्।
अनमोल फ्यासिलिटी क्लिनर्सले काठमाडौंको ओमबहालमा महिला र बालबालिकामाथि अनुमति बिना हानिकारक रसायन छर्किदै । तस्वीर: पुर्णिमा श्रेष्ठ
— Poornima Shrestha (@poornimashresth) May 3, 2020
आइतबार राति सार्वजनिक भएका ती भिडियो र तस्वीहरूमा मास्क, गाउन जस्ता व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगाएका तीन जना व्यक्तिले बालबालिकालाई किटनाशक रसायन छर्किएको देखिन्छ। यससम्बन्धी फोटो र भिडियो फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठले ट्वीटर मार्फत सावर्जनिक गरेकी थिइन्।
कम्पनीले ओमबहाल बाहेक कलंकी, कालिमाटी, बल्खु, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर र बालाजु लगायतका क्षेत्रका स्थानीय र प्रहरीमाथि रसायन छर्किएको थियो। ती क्षेत्रमा रसायन छर्किएकोबारे कम्पनीले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत प्रचार गरेको छ।
बसमा चढ्दै गरेका यात्रुमाथि हानिकारक रसायन छर्किदै । तस्वीर:अनमोल फ्यासिलिटी क्लिनर्स
कम्पनीले ती ठाउँहरुमा रसायन छर्ने काम हिमाली खबर डटकमसँगको सहकार्यमा गरेको जनाएको छ।
कम्पनीका बजार प्रबन्धक निश्चल घिमिरेका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानका स्थानीयहरूमा २१ दिनदेखि रसायन छर्किने काम भइरहेको छ। उनी ओमबहालमा मात्र ६० जना स्थानीयलाई भिरोक नामक रसायन छर्किएको बताउँछन्।
“घर जान बाटोमा हिंडिरहेकाहरुलाई पनि संक्रमणमुक्त गर्न भनेर रसायन छर्किएका हौं”, घिमिरे भन्छन्, “कम्पनीबाट खट्ने स्वयंसेवकलाई फिल्डमा खटाउनुअघि उनीहरुमाथि पनि रसायन छर्केर पठाउँछौं।”
भाइरस नाश गर्ने नाममा मापदण्ड नपुगेका रसायन बाहिरी सतहमा छर्किंदा पनि जीवजन्तु, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने चिकित्सक तथा विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन्। तर, सोझै मानिसमाथि नै रसायन छर्किने कार्यले महामारी नियन्त्रणको नाममा मानव स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको देखाउँछ।
प्रहरिमाथि हानिकारक रसायन छर्किदै । तस्वीर:अनमोल फ्यासिलिटी क्लिनर्स
‘शरीरमा रसायनको प्रयोग घातक’
अनमोल फ्यासिलिटी क्लिनर्सले मात्र नभई अन्य विभिन्न संघसंस्था र कतिपय सरकारी निकायले समेत कुनै मापदण्डविना जथाभावी रसायन छर्किरहेका छन्। तर, अनमोलले बालबालिकामाथि रसायन छर्किएको भिडियो सावर्जनिक भएपछि चिकित्सकहरूले यस्तो कार्य घातक हुनसक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
ट्विटरमा सार्वजनिक भिडियोमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै डा. अभिषेकराज सिंहले बालबालिकामाथि रसायन छर्ने कामलाई गलत भनेका छन्। हिमालखबरसँग डा. सिंहले भने, “रसायनहरु जथाभावी मानव शरीरमा छर्न मिल्दैन। यो अत्यन्तै लापरवाहीपूर्ण काम हो, तुरुन्त रोक्नुपर्छ।”
काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र कोजू क्लोरिनयुक्त यस्ता रसायन मानिसको शरीरमा छर्किन नहुने र अनुहारमा त झन् प्रयोग गर्नै नहुने बताउँछन्। “त्यसमा पनि बालबालिकामाथि निर्जीव वस्तुमा जसरी रसायन छर्किने काम आपत्तिजनक हो”, उनी भन्छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले संक्रमणमुक्त गर्ने नाममा रसायनहरू शरीरमा छर्किनाले कोभिड–१९ बाट सुरक्षित नगर्ने बरु खतरनाक हुनसक्ने बताएको छ। डब्लूएचओका अनुसार, यस्ता रसायन विषाक्त हुने तथा छाला र आँखा बिगार्छ। उसले सार्वजनिक रूपमा अपिल नै गरेको छ, “क्लोरिन र संक्रमणमुक्त गर्न भन्दै प्रयोग गरिने अन्य रसायन बालबालिकाको सम्पर्कदेखि टाढै राख्नुपर्छ।”
यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि रसायन मानव शरीरमा छर्किनु हानिकारक हुने भएकाले यस्तो कार्य नगर्न भनेको छ। सोमबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफ्रिङमा प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले क्लोरिन जस्ता रसायनहरु शरीरमा छर्कंदा वा लगाउँदा कोभिड–१९ को भाइरस नाश नहुने बताएका छन्। “शरीरमा सीधै यस्ता रसायन छर्किनु हानिकारक हुन्छ”, उनले भने।
बालकमाथि हानिकारक रसायन छर्किदै । तस्वीर: पुर्णिमा श्रेष्ठ
अनमोलले छर्किएको भिरोक रसायन के हो ?
अनमोल फ्यासिलिटी क्लिनर्सले ओमबहाल लगायतका ठाउँमा छर्किएको भिरोक नामक रसायनबारे हिमालखबरले खोज गरेको थियो। यो रसायन नेपाली औषधी उत्पादक कम्पनी एमडीएच फर्मास्युटिकलले उत्पादन गरेको भेटिएको छ।
भिरोकमा १.५ प्रतिशत सोडियल क्लोराइड, २१.४१ प्रतिशत पोटासियम पेरोक्सिमोनोसल्फेट र ७७.०९ प्रतिशत अन्य तत्व मिलाइएको छ। यसमा नालिक एसिडको पनि मिश्रण छ। यो रसायन पानीमा घुलेपछि ९.७५ प्रतिशत क्लोरिन निकाल्ने कम्पनीबाट हिमालखबरलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ।
जबकि, डब्लूएचओका अनुसार क्लोरिन मिसिएको रसायन मानव शरीरमा प्रयोग गर्नु घातक हुन्छ। डा. कोजू भन्छन्, “९.७५ प्रतिशत क्लोरिन मिसिएको रसायन मानिसको शरीरमा छर्नु खतरनाक हो। यसले आँखा र छालामा एलर्जी गराउने र अन्य दीर्घ रोग निम्त्याउन सक्छ।”
विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्लोरिनयुक्त रसायनको प्रयोग हानिकारक रहेको भन्दै निकालेको सुचना ।
अनमोलका बजार प्रबन्धक घिमिरे उत्पादक कम्पनीसँग सोधपुछ गरेर भिरोक मानिसमा पनि छर्किन मिल्छ भनेका आधारमा प्रयोग गरेको बताउँछन्। “रसायन कति सुरक्षित छ भन्नेबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन, उत्पादक कम्पनीले छर्किन मिल्छ भनेपछि प्रयोग गरेका हौं।”
भिरोकको उत्पादक एमडीएच फर्मास्युटिकलका सञ्चालक दीपकप्रसाद दाहालसँग यसबारे प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो कम्पनीले कुनै पनि संस्थालाई मानव शरीरमा उक्त रसायन प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको बताए।
“भिरोक रसायन अस्पताल वा घरका भित्ता, भुइँ, टेबुल, कम्प्युटर, टिभी जस्ता सामग्रीलाई संक्रमणमुक्त र सफा राख्न प्रयोग गर्ने गरी बनाइएको हो”, दाहालले भने, “यो रसायन मानिसको शरीरमा छर्न हुँदैन।”
उनी उक्त रसायन मानिसको शरीरमा छर्केर दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको बताउँछन्। “यसैगरी दुरुपयोग हुन सक्छ भनेर हामीले नै स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभागलाई सुझाव दिएका थियौं, यस सम्बन्धमा निर्देशिका बन्ने क्रममा रहेको जानकारी पाएका छौं”, दाहालले भने।
अनमोल फ्यासिलिटीले काठमाडौं उपत्यकामा रसायन छर्किन महानगरपालिकाबाट अनुमति नलिएको पनि भेटिएको छ। कम्पनीका बजार प्रबन्धक घिमिरेले महानगरसँग अनुमति नलिई रसायन छर्केको स्वीकारे।